Inqwaba uvele ezweni lanamuhla ukuzibonakalisa entsha, abaqala nje ukuthandwa. Ngokwesibonelo, ungase ubuze, lokho kuyinto "umgqugquzeli", "umphathi yokuthengisa asebenzayo" nokunye. Umgqugquzeli ungumuntu kusukela umsebenzi okuyinto kuncike ngqo ekuphumeleleni inkampani yokukhangisa design. Ngaphezu nje umgqugquzeli kuchazwa ngamashumi ayisihlanu amaphesenti kahle izenzo.
Ngakho-ke yini ngokuthi "umgqugquzeli" futhi yiziphi izibopho zayo? Man mkhakha senzelwe ukusungula ukuxhumana umthengi ngezindlela ezahlukene. Lokhu kungaba ukusatshalaliswa amapheshana, isethulo jikelele, izibonelo zalokho, okuyinto babathanda kakhulu abathengi, isipho ukuthengwa komkhiqizo zimenyezelwe noma yokunambitha.
On kahle kanjani umgqugquzeli uyakwazi ukuxhumana namakhasimende kanye abathandwa izimpahla zabo ahlinzekwa noma imikhiqizo kuzoncika ubukhulu bale funa , futhi ngenxa yalokho, nzuzo ukuthi ufake imali enkulu inkampani yokukhangisa izimali zabo. Yingakho, abagqugquzeli bokusetshenziswa ukuqeqeshwa wachitha eziningi umzamo. Okunye futhi okubaluleke ngokufanayo ngokubukeka kwabo.
Izimfuneko esibaluleke kakhulu ikhandidethi lesi sikhundla zimi kanje:
ikhono elihle lokukhulumisana nabanye;
isikhundla esebenzayo empilweni ;
Nge lezi zimfanelo, noma okungenani u-60% elihambisana incazelo edingekayo, umgqugquzeli abazoba ayikwazanga kuphela aphumelele, kodwa futhi ukuthola umsebenzi wabo imali esezingeni elifanele.
Ngokwesilinganiso yonkana umsebenzi ezweni abagqugquzeli lilinganiselwa isukela ruble ngehora 60 kuya ku-80, kodwa imali kuncike ezicini eziningi kusukela agency ukukhangisa. Umthuthukisi - kuba umsebenzi othembisayo. Ukuba uzuze imiphumela emihle kakhulu, omunye bangathembela ezihambayo up isitebhisi umsebenzi. Ngokwesibonelo, kungase elinde okuthunyelwe umphathi iphrojekthi noma ukukhangisa BTL-imenenja, ogama imali iphezulu kakhulu. Ngesikhathi umgqugquzeli benza okuningi amathuba okuthuthuka. Oholela ukukhangisa ejensi basebenzisa amaphrojekthi ahlukahlukene asetshenzisiwe, kuhlanganise inhlangano nemibukiso, izingqungquthela, izenzakalo zezinkampani, imicimbi ekhethekile okuhloswe ngazo okwandisa nekusebenta inkampani. Esinye isici esibalulekile ukuba sifeze ukukhuphula kanye imiklamo abezindaba ukukhangisa, okuyinto futhi zihlanganisa inani elikhulu izinyathelo futhi zidinga ukuqaliswa inqwaba Ochwepheshe.
ngokuvamile Umthuthukisi kuyinto umfundi wezemfundo. Abafundi abakwazi ukusebenza isikhathi esigcwele, kodwa unentshisekelo yokuthola imali eyengeziwe. Ngaphezu kwalokho, umgqugquzeli iyathandwa ngezimpelasonto, kuba kulezi zinsuku, abaningi ukuyothenga.
Kufanele kuqashelwe ukuthi umgqugquzeli kungaba basebenzela i-ejensi ukukhangisa, noma ngokuqondile kwinkampani. Njengomthetho, oda inkampani kusukela agency ukukhangisa umkhankaso nanoma yimuphi wokuthuthukisa, kanye ejensi ukhetha abagqugquzeli efanelekayo. Kunezinhlobo eziningana abagqugquzeli.
Umthuthukisi Consultant e kokukhuluma amakhasimende mayelana nemikhiqizo ethile, ovele ukunikela umkhiqizo othile. Kulokhu, umbuzo, lokho kuyinto "umgqugquzeli", kufanele kuphawulwe ukuthi lo muntu udinga ukwazi mayelana nomkhiqizo kakhulu, ephelele ukuba ulwazi mayelana zokuhweba, izinhlobo, abakhiqizi, ukuze bakwazi ukuphendula yonke imibuzo yamakhasimende.
Kwesinye isikhathi empumelelo emsebenzini kudinga indlela ekhethekile futhi elikhanyayo, Ikhambi elihlakaniphile. Kulokhu, kubonelelwa kakhulu ama-ukwabelana Costumed. Mhlawumbe, lo msebenzi silula, ngoba uhambo kwanele ihholo zokuhweba, edonsa amakhasimende suit elikhanyayo. Ngokuvamile abagqugquzeli waqasha kunika amapheshana ngolwazi mayelana nomkhiqizo zimenyezelwe, inkampani, isenzo edlulayo.
Sithemba ukuthi lesi sihloko uzokuphendula, lokho kuyinto "umgqugquzeli." Akunzima kakhulu umsebenzi ukuthi kuyoba yinto enhle kakhulu yokuqalisa kubantu abasha futhi kuzovumela buthelela inhlokodolobha kokuqala.
Sodium percarbonate: isicelo, umsebenzisi, ukubuyekezwa
Yuriyu Dolgorukomu Isikhumbuzo eMoscow. Itshe lesikhumbuzo Yuriyu Dolgorukomu e Kostroma